Mabhuku akanakisa esainzi
Helgoland naCarlo Rovelli
Dambudziko resainzi harisi rekutsvaga chete kana kupa mhinduro kune zvese. Nyaya iri zvakare yekupa ruzivo kunyika. Kuburitsa pachena kunodiwa sekuoma kwazvinoita apo nharo dzinounzwa pakadzika pechirango chega chega. Asi sezvakataura murume akachenjera, isu tiri vanhu uye hapana che...
Pamusoro 3 Oliver Sacks Books
Kana mabhuku esayendisiti nezvesainzi yake ikava mhando yekutengesa zvakanyanya kweanodzidzisa, zviri pachena nekuti isu tiri pamberi pemunyori anofarira kutenderedza ruzivo rwake kune chero munhu anoda kusunungura, kunyangwe iri kiyi dzekutanga kana kufungisisa kwake pachena, zvinonakidza ...
Kunze kwenyika, naAvi Loeb
Musoro wezita rakazara "Wemuchadenga: Hunhu pachiratidzo chekutanga chehupenyu hwakangwara kupfuura Pasi" uye chinofanira kuverengerwa kanokwana kaviri kutora kukosha kweshoko rakadaro. Mushure memazana emazano, mabhaisikopo, psychotropic zvinodhaka uye zvakavanzika zvepamusoro zveNASA, zvinoita sekunge ...
5 akanakisa mabhuku nezvebonde
Sezvo Dr. Ochoa akaonekwa pachiratidziro mukutanga kwema90s, zvebonde uye zvebonde zvakatanga kufamba pamwe munzira dzinodiwa dzekuzivisa kwakakurumbira. Nyaya yebonde yakatora padanho renzvimbo yekutaurirana nekutsvaga (senge zvese zvinoonekwa paterevhizheni). The…
Dambudziko Rinoipisisa, rakanyorwa naMichael T. Osterholm
Iri bhuku rechiporofita iro rakatanga kuyambira pamusoro penjodzi yekona. Iri bhuku, rakanyorwa neimwe yenyanzvi dzepasi rose muzvirwere, rakatarisira denda riri kurova nyika nhanho nedanho. Ichi chinyorwa chakagadziridzwa chinosanganisira chirevo umo dambudziko re ...